आयात घट्दा पनि राजस्व संकलन वृद्धि ! – Kendra Khabar
आयात घट्दा पनि राजस्व संकलन वृद्धि !
in अर्थ, शीर्ष खबर, समाचार
२०७७, ११ माघ आईतवार ०८:०२
कोरोना महामारीको असर तथा सरकारले केही वस्तुमा उच्च कर लगाउँदा आयात घटेको छ । तर, राजस्व संकलनमा भने सुधार भएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ६ महीनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा रू. ११ अर्बले राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ ।
यस अवधिमा आयात भने ४ दशमलव ८१ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा आयात रू. ३३ अर्बले घटेर ६ खर्ब ६१ अर्बमा सीमित भएको छ । पुस मसान्तसम्म विभागले कुल रू. १ खर्ब ८८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ ।
विभागले अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रू. १ खर्ब ७७ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो ।
सरकारले महँगा तथा विलासी वस्तुुमा भन्सार दर वृद्धि गरी आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएपछि आव २०७५/७६ पछि आयात घट्दै गएको थियो ।
त्यसमाथि सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गतवर्ष चैतदेखि गरेको बन्दाबन्दीका कारण पनि आयात निर्यात प्रभावित भएको देखिन्छ ।
सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण पहिलो ३ महीनामा उद्योग, कलकारखानाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएकोमा हालसम्म व्यवसाय चलायमान बन्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूका अनुसार अधिकांश उद्योग कलकारखाना अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् ।
विस्तारै उद्योग कलकारखानाहरू खुल्ने क्रममा रहे पनि उद्योगले क्षमताअनुसार उत्पादन शुरू गरिसकेका छैनन् । कतिपय उद्योग त आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द नै छन् । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले अहिले ५० करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग आधा बन्द रहेका छन् भने १५ देखि ५० करोडसम्म लगानी भएका उद्योग ५१ प्रतिशत बन्द छन् ।
यस्तै १५ करोडसम्म लगानी भएका उद्योग ६२ प्रतिशत बन्द रहेका छन् । यस्तै लघु तथा साना व्यापार पनि ४९ प्रतिशत बन्द भएको तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योग पूर्ण तथा आंशिक रूपमा सञ्चालन भइनसकेकाले आयातसहित समग्र वैदेशिक व्यापारमा यसको असर परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बन्दाबन्दीका कारण बन्द उद्योग हालसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए ।
आर्थिक समस्याका कारण उद्योगहरूले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको उनले बताए । यसकारण आयातनिर्यात दुवै घटेको उनको भनाइ छ ।
राजस्व संकलन वृद्धि हुनुका कारण उच्च भन्सार दर भएका सामानको आयात बढ्नु भएकोे भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए । यस अवधिमा मोबाइल, ल्यापटप, स्वास्थ्य सामग्री, चिनीलगायत वस्तुको आयात बढेको उनको भनाइ छ । ‘समग्र आयात घटे पनि उच्च भन्सार भएका सामानको आयातमा भएको वृद्धिका कारण राजस्व संकलन बढेको हो,’ उनले भने ।
पेट्रोलियमा पदार्थको आयात घटे पनि त्यसैमा भन्सार दर बढाइएका कारण यसबाट संकलन हुने राजस्व बढेको महानिर्देशक दाहालले बताए । उनले भने, ‘चालू आवमै पेट्रोलियम पदार्थको राजस्व दर वृद्धि गरिएकाले विगतको अनुपातमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात नबढे पनि राजस्व वृद्धिमा योगदान पुगेको देखिन्छ ।’
कोरोनाका कारण बन्द उद्योग हालसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइनसकेकाले फलाम, सिमेन्ट, मेशिनरी, बिलेट औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधनलगायत वस्तुको पनि आयात घटेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस अवधिमा कुल ७ खर्बको वैदेशिक व्यापार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको भए पनि यस वर्ष रू. ३ अर्बले मात्र निर्यात बढेर कुल रू. ६० अर्बको निर्यात भएको देखिन्छ । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा निर्यात वृद्धि २६ प्रतिशतले भएकोमा यस वर्षको निर्यात वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दी र निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको पाम तेलको आयातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धको असर परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘कुल निर्यातको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म योगदान रहेको पाम तेलको आयातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको असर समग्र निर्यातमा परेको देखिन्छ,’ पाम व्यवसायी प्रदीप मुरारकाले भने ।समाचार साभारः आर्थिक अभियान